सावधान ! गुप्ताङ्गको रौं काट्दा कति असर ? आयो यस्तो डरलाग्दो रिपोर्ट – Idea Khabar
सावधान ! गुप्ताङ्गको रौं काट्दा कति असर ? आयो यस्तो डरलाग्दो रिपोर्ट
आइडिया खबर२०७६ आश्विन १७, शुक्रबार १८:२२
एजेन्सी । शरीरको बाँकी अंगको तुलनामा गुप्ताङ्ग क्षेत्रको रौं काट्दा के हुन्छ भन्ने बारेमा कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? यदि सोच्नुभएको छैन भने अब जान्नुस्ः
शरीरको अन्य ठाउँको तुलनामा गुप्ताङ्ग क्षेत्रमा रौंको बृद्धि विकास बढी हुने गर्छ । मानिसले पनि गुप्ताङ्गका रौंहरु पटक पटक खौरिने वा छोट्याउने गर्छन् । तर, यहाँका रौं काट्नु स्वास्थ्यका लागि हानिकार हुने एक अध्ययनले देखाएको छ । यसका पछाडि एक कारण छ, यहाँ रौं काट्नुभन्दा नकाट्नु नै फाइदा हुन्छ ।
गुप्ताङ्ग क्षेत्रका रौं काटेपछि तपाईलाई सफा र हलुका महसुश गर्नु हुन्छ होला तर, यहाँका रौं नकाट्ने मानिसको तुलनामा तपाइँलाई यौनजन्य संक्रमणको जोखिमको बढी खतरा हुने गर्छ ।
हालै अमेरिकामा १८ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका साढे ७ हजार भन्दा बढी मानिसहरुमा गरिएको एक अध्ययनले गुप्ताङ्ग क्षेत्रका रौं काट्ने मानिसहरुमा यौनजन्य संक्रमण खतरा ८० प्रतिशत भन्दा बढी रहेको देखाएको छ ।
शोधकर्ताका अनुसार गुप्ताङ्ग क्षेत्रका रौं खौरिनु वा छोट्याएमा छाला (त्वचा) फाट्न सक्छ जसका कारण भाइरस आदी सहजै हाम्रो शरीरमा घुस्न सक्छन् । दाह्री काट्नका लागि एउटै औजार (ब्लेड) दुई जनाले प्रयोग एचआइभी संक्रमणका खतरा हुने जस्तै यो अध्ययनले पनि रौं काट्न वा खौरिन प्रयोग हुने सामग्री एक आपसमा प्रयोग गर्नु खतरा हो भनेको छ ।